Ikhaya Lamaholide LaseRose
(48 okushiwo abanye)
I-Rose Holiday Home iyikhaya lamaholide elithokomele, elihlangene futhi lesimanje elinamakamelo okulala ama-2, Igumbi Lokuphumula, Ikhishi kanye namaBathroom ama-2. Kuhlanganisa futhi ithala (i-balcony) kanye nevulandi (indawo engaphandle) engasetshenziselwa izinjongo zokudlela nezokuzijabulisa. Indawo ekahle yawo wonke umuntu othanda ukuphumula, ukuphumula futhi achithe isikhathi esithile sekhwalithi nabangane/umndeni phakathi kwesimo sezulu esihle sase-Yercaud. Indlu inikeza zonke izinsiza zesimanje ezifana ne-TV eneCable, i-Wifi kanye neZisetshenziswa Zokupheka.
I-Rose Holiday Home ihluke kakhulu futhi ingeyakhe ngokunikeza izivakashi zethu indawo yonke ezihlinzeka ngokuvikeleka okukhulu nokuba yimfihlo. Itholakala endaweni enokuthula kodwa itholakala kalula kuzo zonke izindawo zezivakashi. I-Yercaud Lake iqhele ngamakhilomitha angu-2.5 ukusuka ekhaya lethu.
4.79(48 okushiwo abanye)
4.79 · 48 okushiwo abanye
Enye yezindawo ezinhle kakhulu e-Yercaud. Ngokwedlulele impela, izolile futhi ivaliwe ezindaweni eziminyene zase-Yercuad. Kukhona ama-bungalows ambalwa wamakholoni, izizinda, izitolo zeconfectionary, izindlu zomdabu nezindawo zokungcebeleka eziseduze nathi
Ngeke ngitholakale mathupha. Umnyango nomnakekeli uzoqinisekisa ukuthi zonke izidingo zakho ziyahlangatshezwa. Nokho ngingathanda ukuhlanganyela nesivakashi sami uma kwenzeka ngitholakala.